by Paige Rushbrook, Geography Intern
UFrancisco Pizarro kunye ne-Incas
Ngomnyaka we-1533 uFrancisco Pizarro, umqhubi waseSpain , wahlala ePeru ukuze azuze amandla kwaye aphelise ilizwe, atshintshe iinguqu zelizwe ngokupheleleyo. I-Peru ishiywe ihlahliwe, njengoko iSpeyin ithe yazithenga izifo kubo, zabulala ngaphezu kwe-90% yabantu baseInca.
I-Incas yafika ngo-1200 CE, iqela lomthonyama labazingeli nabaqokeleli, elibandakanya u-Ayllus, iqela leentsapho ezilawulwa yiNtloko, ebizwa ngokuba yiCuraca. Uninzi lwama-Incas aluzange luhlale kwizixeko njengoko ezi zinto zisetyenziselwa iinjongo zikaRhulumente, nje ukutyelela kwishishini okanye kwimikhosi yonqulo njengoko babenokholo olunzulu.
Uqoqosho lwe-Inca lunokuqwalaselwa ngempumelelo njengoko iPeru yayinezimbiwa ezivelisa izityebi ezinjengegolide kunye nesilivere kwaye zineyona mikhosi enamandla kunamhlanje, zisebenzisa izixhobo ezininzi kunye nokuqasha zonke iinkunzi ezinokwenza umkhosi.
AmaSpanish ayinqobe iPeru, ngenjongo yokutshatyalalisa ilizwe, ukuguqula ukuguqulwa kwelizwe ngokupheleleyo, ngokufana neenjongo zamanye amandla ekoloni ngexesha lokuhlola kunye neenkoloni . Ngowe-1527 omnye umqhubi waseSpain wayala umkhumbi waseSpeyin, wabona i-Incase engama-20 kwi-board, wamangaliswa ukufumanisa ubunqwenela obuninzi, kuquka igolide nesiliva. Waqeqesha abathathu be-Incas njengabahumushi njengoko wayefuna ukunika iziphumo zakhe, oku kwakhokelela ekuhambeni kukaPizarro ngo-1529.
AmaSpeyin ayefuna ukuhlolisisa, axhaswa yilizwe elityebi. Kwabanye, njengoPizarro nabazalwana bakhe, kwabenza bakwazi ukubaleka kwiindawo ezihluphekayo zase-Extremadura, eNtshona Spain.
IsiSpeyin esongezelela ukufumana udumo kunye namandla eYurophu, ngaphambili eyayinqoba uMbuso waseAztec, eMexico ngo-1521 waza waqala ukuyisa i-Central America ngo-1524.
Ngethuba lakhe lesithathu ukuya ePeru, uFrancisco Pizarro wanqoba iPeru ngo-1533 emva kokubulala uMbusi we-Inca, uAtahualpa.
Wayexhaswa yimfazwe yombango eyenzeka phakathi kwabazalwana baka-Incan, oonyana bakaSapa Inca. UPizarro wabulawa ngo-1541, xa i-'Alagroro 'yenziwa iGurisi entsha yasePeru. Ngomhla wama-28 Julayi 1821 i-Peru yazimela phantsi kolawulo lwamaKoloni, emva kwejoni lase-Argentina, elibizwa ngokuthi iSan Martin, layisa iSpeyin ePeru.
I-colonization yaseSpain yaholela ekubeni iSpanishi ibe yilwimi ebalulekileyo ePeru. IsiSpeyin satshintshile abantu belizwe kwaye sashiya uphawu lwabo, isambatho seSpeyin yeengalo 'sisalugxina ePeru emva kokuba sinikezwe nguSpeyin King Charles 1 ngo-1537.
I-Spanish yazisa izifo kunye nabo, ibulala ii-Incas ezininzi kuquka i-Inca Emperor. Ama-Incas abanjwe i-malaria, imasisi kunye ne-smallpox njengoko bengenayo i-immunity. ND Cook (1981) wabonisa ukuba iPeru ihlangene nabantu abangama-93% behla ngenxa yenkoloni yaseSpain. Nangona kunjalo, ii-Incas zadlula i-syphilis kwiSpeyin ngokubuyisela. Izifo zabulala inani elikhulu labantu baseInca; Ama-Incas atyhidiweyo kwizifo kunokugqithisa kwibala lemfazwe.
I-Spanish nayo yafeza injongo yayo yokusasaza ubuKatolika ePeru, malunga ne-ezine-yesine yabemi basePeru namhlanje njengamaRoma Katolika. Inkqubo yezemfundo yase-Peru ngoku iquka bonke abantu, ngokungafani nokugxila kwiklasi yokulawula ngexesha lolawulo lwama-colonial.
Oku kwaxhamla iPeru ngoku, ngoku isinezinga lokufunda nokubhala, i-90% yokufunda nokubhala, ngokungafani nabangenalwazi nabangamahlwempu ngexesha lolawulo lwaseSpain, ngoko ke abanako ukuqhubela phambili njengelizwe.
Ngokubanzi, iSpeyin yaphumelela ekujoliseni ukuguqula ngokupheleleyo abantu basePeru. Banyanzelisa inkolo yamaKatolika kwi-Incas, basala namhlanje kwaye bagcina iSpanishi njengolwimi oluphambili. Babulala inani elikhulu le-Inca labantu ngenxa yezifo ezivela eYurophu, ukubhubhisa abantu baseInca kunye nokusetyenziswa kobuhlanga ukudala inkqubo yolawulo lwama-Incas phantsi. I-Spanish nayo yachaphazela kakhulu iPeru njengoko yayinika igama layo, ephuma ekungaqondeni igama lesiNdiya "lomlambo."
Yintoni Abavuni? (Iintetho: Azingabonakalisi)
UDavid Allan Coe Biography
Imihla yabalawuli bamaRoma
Imfazwe Yehlabathi II: Major Erich Hartmann
Indlela yokwenza i-Acetate yeCopper esuka kwiCopper
IAshland University Admissions
Iincwadi ezi-5 eziphezulu zamahhala zikaSwami Vivekananda
AmaRekhodi aMazwe aMazwe aMaThathu amaRekhodi
Iincwadi ezi-12 eziMnandi zokuBonga abantwana
I-Cyberstalking kunye neNkwenkwekazi: Iinkcukacha kunye neenkcukacha